Abdulqadir Jiilaani oo Qoray Faalo ku saabsan booqashadii Madax weyne Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee Degmada Raaso iyo sidey umuuqatey. - Cakaara News
Abdulqadir Jiilaani oo Qoray Faalo ku saabsan booqashadii Madax weyne Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee Degmada Raaso iyo sidey umuuqatey.
ra'yiga dadwaynaha(CakaaraNews) Arbaco August 14,2013. Hadaan wax yar oo taariikha dib u jaleecno, bulshada ku nool deegaanka Raaso iyo agagaarkeeda ayaa muddo badan shaki iyo walaacba ka qabay Maamuladii soo mari jirey DDSI, shakigaas oo isu badalay kama dambaystii dagaalo isdaba joog ahaa oo dhexmaray beelihii walaalaha ahaa, ee biyo iyo caws wadaaga ahaa, ee wiil iyo abtigi, seedigi,sodogi, ina abtigi,ina habreedki iyo awawgi hooyo wada ahaa.
Dagaaladaas oo ay dabada ka hurinayeen qaar ka mida maamuladii aan kor kusoo sheegey, oo waliba si toosa uuga dacareeyey xuquuqdii ay beesha Reer Fiqi Cumar ku lahayd deegaanka, sida beelaha kaleba ay xuquuqdooda uga helaan deegaanka. Dhibaatadaas badnayd ee beeshaa soo martay waxay dhalisey in beeshii reer fiqi cumar dhexdeeda is khilaafto, oo waliba dagaal adag oo laba maalmood ahaa dhexmaro,oo keeney dhimasho aad u badan iyo dhaawacba, Intaas hadaan iskaga soo gaabiyo oon halkaa ku dhaafo.
Maamulkii DDSI oo Rabbiga weyni uu gacanta usoo galiyey Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo dhalin yaro kale oo aad u firin fircoon oo lashaqaysa ayaa Allaha weyni dariiqa toosan cagta u saaray oo Beeshii Reer Fiqi Cumar xuquuqdeedii u bilaabay, oo Magaalada Raaso ku magacaabay Degmo buuxda, oo waliba muddo aad u gaaban horumar lataaban karo si xawli ah kaga hirgaliyey. Waxay beeshaasi dareentay makiiba iney yihiin bulsho Soomaaliyeed oo lasiman beelaha kale ee walaalahooda, oo rajadoodii maqnayd ayaa usoo laabatay.
Mudane Cabdi Maxamuud cumar waxaa kale oo uu ku guuleystey inuu beesha oo dagaalkii dhexmaray darteed colaad ku kala maqnayd inuu isagoo Allaha weyn la kaashanaya kadibna dawladda dhexe uu heshiis taariikhi ah dhex dhigo, isuna soo raro oo meel soo wada dajiyo ( Raaso ).
Gabagabadii: Madax weynuhu isagoo booqasho muddo dheer qaadatay kusoo kala bixiyey 4 Gobol iyo dagmooyin aad u tirabadan ayuu Gobolka Afdheer ka bilaabay Degmada Raaso oo muddo dheer u oomanayd inuu maruun soo booqdo Madax weyne u daacadihi, kiina wuxuu noqday Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ahaa ninkii xuquuqdoodii baadida ku maqnayd usoo heley. 15 kii bisha July 2013, oo ku aadaneyd 8dii bisha barakaysan ee Ramadaan.
goor barqin kulul ah ayuu madax weynuhu soo gaadhey Degmada Raaso, iyadoo waddo baabuurta badhtamaha magaalada marta ay Reer Raaso siqiir iyo kibiir labada geesood ka safnaayeen, masaafo aad u dheer oo wadada ah oo dhamaan dadku caleemo qoyan iyo ubax kala nooc -nooca ay ruxayeen.
Madax weynuhu intuu iskaga dagey gaadhigii uu saarnaa ayuu lug ku dhexmaray dhammaan dadkii oo dhan, hase yeeshee waxaa dhib ku noqotey inuu si toosa wadada u maro sababtoo ah dhammaan dadkii wadada labada dhinac ka safnaa oo Rag iyo Dumarba ruux waliba doonayey inuu Madax weynaha qoorta iskaga maro oo uu dhunkado, jacayl ay u qabaan darteed,daryaanka sacabka iyo mashxaradda ayaa waxba lala maqliwaayey, oo beeni waa shay xune waxaa halkaas ka dhacday farxad aad u weyn oo dhammaan labada geesoodba si aada u saameysey (Bulshdii & waftigii).
Madax weynaha iyo waftigii ballaadhnaa ee lasocdey waxay halkaas ku sugnaayeen muddo laba maalmooda, shirar dhawr ahna waxay lagaleen bulshadii ay halkaas ugu tageen, oo waliba waxaa dadweyne aad u tira badnaana loo qaybiyey sooryo sharaf lacageed, kadibna Madax weynaha iyo waftigiisii halkaas ayay ka ambabexeen oo si sharafle loo sagootiyey.
Booqashaddi Madax weyne Cabdi Maxamuud Cumar ee Degmada Raaso oo ay kamid ahaayeen waftiga: ku xigeenka af hayeenka baarlamaanka dawladda dhexe ee itoobiya, Madaxa xarunta dhexe ee DDSI, Wasiirro iyo Wasiirro ku xigeeno dhawr ah, labada gudoomiye oo Gobolada Shabeelle iyo Afdheer iyo waliba masuulin kale oo aad u tiro badnayd, iyo waliba wafti ballaadhan oo Qurbo jooga oo u dhalatay Degmada/beesha lasoo booqday ayaa waxay ku reebtey Beesha Reer Fiqi Cumar Farxad lama illoobaan ah oon waligood qalbigooda ka go’aynin.
Waxaa faaladan soo diyaariyey: Abdulqadir Jiilaani, oo goob joog ka ahaa dhacdadaas qiimaha badnayd.